Blockchain News 18.05.2018 - Blockchain News
Fanantenana ny harena ankibon'ny tany ao amin'ny 2018
Mey 18, 2018 Admin
Unionbank in Filipina harena ankibon'ny tany dia manapariaka Bitcoin fitaovana
Bitcoin Mbola hisarihana ny sain'ny ny andrim-panjakana ara-bola. Ny banky lehibe indrindra tany Philippines, Unionbank, efa nanolotra ny Bitcoin fitaovana fitrandrahana nandritra ny raharaham-barotra amin 'ny Conference.
Izany no manamarika ny banky lehibe voalohany ampahibemaso ny harena ankibon'ny tany Bitcoin.
Infosys India ny mpiara-miasa amin'ny banky ho an'ny blockchain varotra ara-bola Network
Infosys no trandrahana blockchain ny teknolojia vaovao mba hitondra efficiencies hanakalo ny vola.
Ny blockchain-miorina tambajotra varotra no natao digitize fitantanam-bola ara-barotra sy raharaham-barotra dingana mandrakotra faritra toy ny tompony fankatoavana, fanamarinana ny antontan-taratasy sy ny vola.
Going handroso, ny vondrona dia mikendry ny mamorona “feno blockchain tontolo iainana, mankany amin 'izany anjara lehibe fananganan'anaka amin'ny teknolojia ity,” Ajay hoy Gupta, mpitantana ambony ao amin'ny ICICI ankapobeny Bank.
Tel-Aviv tahiry fifanakalozana hampiasa blockchain ho an'ny sehatra mampisambotra vaovao
Ny Tel Aviv Stock Exchange dia teaming miaraka Accenture sy The Floor, Israeliana fintech Hub, mba hanorina blockchain Fiarovana mampisambotra sehatra mikendry mba hamela mivantana mampisambotra ny fitaovana ara-bola rehetra.
Ny sehatra dia hanao zavatra toy ny “iray-fijanonana-tsena rehetra mampisambotra Fiarovana asa, mamela ny fidirana amin'ny boky Fiarovana lehibe kokoa ao anatin'ny fotoana fohy-zana-kazo, na dia miasa ao amin'ny teny fohy-toerana,” Hoy ny fanambarana an-gazety.
Ny zava-nitranga manan-danja indrindra amin'ny 2017 ao amin'ny Crypto Community
Bitcoin ny maranitra ...
Meksika fampandrosoana ny blockchain rafitra mifototra mpanolo-tsaina
Ahy ny governemanta ...
Bithumb voajirika for $...
Previous Post:Ahoana no iray mialoha ny fitondran-tena ny tahan'ny ny cryptocurrency eo amin'ny lafiny ny isan'ny didy napetraka?
Next Post:Blockchain News 19.05.2018
Jolay 17, 2018 Admin
Inona no atao hoe Unboxed Network? Unboxed – a Massive Market Brands are spending
Jona 19, 2018 Admin
History of voalohany cryptocurrency
altcoins bitcoin andian-tsoratra rojo BTC rahona fitrandrahana mpiara heverina coin Coinbase crypto cryptocurrencies cryptocurrency ethereum fifanakalozana hardfork ico litecoin Ma mpitrandraka fitrandrahana Network vaovao vaovao sehatra fifanarahana ripple nanaraka telegrama famantarana famantarana varotra kitapom-batsy